Glass ကို Coating အော်တိုများအတွက်မှုတ်ဆေးဘူး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Glass ကို Coating ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း,Glass ကို Coating ရေမှုံရေမွှား,Glass ကို Coating ကား Worth ဒါဟာ
Home > ထုတ်ကုန်များ > ကားတစ်စီးစောင့်ရှောက်ကုန်ပစ္စည်းများ > Glass ကို Rainproof အေးဂျင့် > Glass ကို Coating အော်တိုများအတွက်မှုတ်ဆေးဘူး
Glass ကို Coating အော်တိုများအတွက်မှုတ်ဆေးဘူး
စူပါ Hydrophobic Rainproof အေးဂျင့်လက်ခဏာ:
စူပါ hydrophobic, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကို
ကားရဲ့ရှေ့နှင့်နောက်ဖန်ခွက်တွင်အသုံးပြုသည်ထိုသို့သောကြာရွက်အဖြစ်နောက်ကြည့်မှန် rainproof, စူပါခိုင်မာတဲ့ hydrophobic သတ္တိလည်းရှိတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်, ဤကုန်ပစ္စည်းအပေါ်တစ်ဦးခြစ်-ခံနိုင်ရည်အလွှာ silicon.Forming ပေါ်လီမာ Multi-အကိုင်းအခက်ကိုတက်ဖန်ဆင်းထားသည် ဖန်မျက်နှာပြင်, nanofilm တည်တံ့ Long က, မိုးရာသီကာလ၌မိုဃ်းကိုရွာစေ Screen, မျက်မှောက်တစ်လိုင်းဖွဲ့စည်းရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုများနှင့်မောင်းနှင်မှုဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ထိုအခါ undried မီ, ဖန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုအညီအမျှသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုလေပေါ်မှာပ,
ဖန်ခွက်ကိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တောက်ပအထိချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်သည် သာ. ကောင်း၏, သွေ့ခြောက်သုတ်ပဝါနှင့်အတူသုတ်။
4. ပမာဏကိုနည်း, ပိုကောင်း။
Active ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: Multi-အကိုင်းအခက်ဆီလီကွန်, Fluorosilicon ပေါ်လီမာ, ရေ
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ကားတစ်စီးစောင့်ရှောက်ကုန်ပစ္စည်းများ > Glass ကို Rainproof အေးဂျင့်
စူပါ Hydrophobic Glass ကို Rainproof အေးဂျင့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော Layer Glass Rainproof Agent အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
nano ကား Glass ကို Hydrophobic Coating Rainproof အေးဂျင့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မော်တော်ကားတပ်ဦးကားရှေ့မှနျဘေးထွက် Windows အတွက် anti-မိုးရေမှုံရေမွှား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
120ml Window Glass အတွက်ရေစိုခံသည့်ရေစိုခံအေးဂျင့်မှုန်ရေမွှား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တပ်ဦး Window ဘို့ရေကိုတွန်းလှန် Glass ကို rainproof အေးဂျင့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Window အတွက် Fog Spray Glass Rainproof အေးဂျင့် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Glass ကို Coating ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Glass ကို Coating ရေမှုံရေမွှား Glass ကို Coating ကား Worth ဒါဟာ ကားတစ်စီး Paint Coating ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Glass ကို Coating လုပ်ငန်းစဉ် Glass ကို Coating ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု Glass ကို Coating အားနည်းချက်များ Laptop ကိုအတွက်အရည်အအေးခံခြင်း